‘एसएलसी पास हुँदा दुःखी भएँ’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
तपार्इं अभिनेता कि लेखक ?
यी दुवै नभएको भए के बन्नुहुन्थ्यो ?
किसान बन्थेँ । सानैदेखि खेतीकिसानीमा रुचि थियो ।
अभिनेता बनिसकेपछि के कुरालाई तपार्इं सबैभन्दा बढी ‘मिस’ गर्नुहुन्छ ?
आमाबा, लेखन र खेतीकिसानीलाई धेरै मिस गर्छु ।
सन् २००७ मा बीबीसी मिडिया एक्सनबाट जागिर थालेको हुँ । महिनाको लगभग ६० हजार रुपैयाँ तलब थापेको थिएँ ।
पास हुँदा पनि दुःखी चाहिँ किन ?
म किसान बन्न चाहन्थेँ । घरमै बस्न चाहन्थेँ । एसएलसी पास भएपछि मलाई बाउले पढाउन शहर खेद्छन भन्ने पक्कापक्की थियो । त्यसैले दुःखी थिएँ ।
यो क्षेत्रले धेरै खालका मान्छेसँग अन्तक्रिया गर्ने अवसर दिन्छ । यसले समाज बुभ्mन अलिकति मद्दत गर्छ । यो कुरा नै बढी मन पर्छ ।
पढ्न–लेख्नबाट वञ्चित बालबालिका देख्दा निकै चित्त दुख्छ ।
तपाईंको अगाडि साँच्चिकै ‘हनुमान’ प्रकट भए भने के गर्नुहुन्छ ?
‘हनुमानजी, म पशुपतिप्रसाद । चिन्नु भएन ?’ भनेर सोध्छु ।
यदि तपाईं देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ ?
सबभन्दा पहिला कुनै एउटा सरकारी अस्पतालको चर्पी आपैmँले सफा गर्छु । अनि, कर्मचारीलाई सफा गर्न लगाउँछु ।
कस्तो कुराले तपाईंलाई बढी खुशी बनाउँछ ?
देशको फलानो ठाउँमा यस्तो चिज बन्यो । यो चिजले यति मान्छे लाभान्वित भए भन्ने समाचार पढ्दा असाध्यै खुशी लाग्छ ।
खादा र टीका लगाएर खाडी हिँडेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी देख्दा एकदमै दुःख लाग्छ ।
‘म विवाहित हुँ’ भनेर सम्झाउँछु ।
म खाना एकदमै मीठो पकाउँछु ।
आफ्नै लगानीमा काठमाडौँमा एउटा आर्ट सेन्टर खोल्ने सपना छ ।
अलि छिटो रिसाउँछु । नयाँ साथीलाई पनि छिट्टै विश्वास गर्छु ।
लगनशीलता र अनुशासन ।
आफूलाई नै मन पर्ने आफ्नो बानी ?
कसैले केही भन्यो भने मलाई ‘रियाक्ट’ गरिहाल्नुपर्छ । त्यो चाहिँ मन पर्दैन । हटाउन खोज्दैछु ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ १६:३० सोमबार
एसएलसी पास हुँदा दुःखी भएँ नागरिक परिवार